Balliyo macmal ah oo loogu talagalay in lagu ekeysiiyo saameynta isbedelka cimilada | Saadaasha Shabakadda
Waxaa jira habab cilmi baaris oo fara badan oo lagu yareynayo saameynta isbedelka cimilada ee meeraha. Mid ka mid ah (oo aan maanta ka hadlayno) waa shabakad ka kooban laba boqol oo balliyo macmal ah oo u adeega inay si fiican u fahmaan sida nidaamyada deegaanka ee adduunka ay u shaqeeyaan oo ay u arkaan sida ay uga jawaabaan saameynta isbeddelka cimilada.
Ma rabtaa inaad ogaato sida cilmi baaristani u shaqeyso iyo natiijooyinka la helo?
1 Balliyo macmal ah
2 Caqabad cilmiyeed
3 Balliyada tijaabada ee jasiiradda
Balliyo macmal ah
Balliyada macmalka ah waxay ku kala firirsan yihiin jasiiradda Iberia waxayna leeyihiin cimilo kala duwan oo si fiican loo kala soocay si loo ogaado dhammaan jawaabaha saamaynta isbeddelka cimilada.
Tijaabada waxaa lagu magacaabaa Iberian Ponds waxayna ka kooban tahay lix xarumood oo ku kala yaal meelo kala duwan oo ku kala yaal Spain iyo Portugal. Meel kasta 32 balli ama balliyo macmal ah ayaa la rakibay, oo u kala jira qiyaastii 4 mitir.
Iyada oo balliyada aad ku abuuri karto xaaladaha cadaadiska, heerkulka, dabaysha, iwm. Jilitaanka nidaamyada dabiiciga ah. Sidan oo kale, moodello ayaa loo horumarin karaa si loo fahmo jawaabta bulshada dabiiciga ah, waqtigan xaadirka ah iyo mustaqbalka, ee isbeddelada deegaanka ee uu sababo isbeddelka cimilada.
Nidaam deegaan kasta oo dabiici ah wuxuu leeyahay adeegyo deegaan. Adeegyadan waxaa loo isticmaalaa in lagu soo nuugo CO2, lagu bixiyo qoryo ama waxyaabo kale oo dabiici ah. Isbedelka cimiladu wuxuu weeraraa tirada iyo tayada adeegyadan nidaam deegaan, isagoo dhaawac u geysta xididdada nidaamka deegaanka. Tusaale ahaan, yareynta biyaha ay heli karaan dhirta, kordhinta heerkulka, baabi'inta nidaamka deegaanka ee biyaha ama dhalaalida khaanadaha.
Xarumahan waxay leeyihiin shaybaar dhexe inta u dhexeysa quraaradda iyo tijaabada xaaladaha dabiiciga ah. Sidaa darteed, waxay bixiyaan macluumaad qiimo leh oo laxiriira shaqeynta dhammaan shabakadaha iskuxirnaanta nidaamka deegaanka iyo go'aaminta barta muhiimka ah ee midkasta oo kamid ah.
Balliyadan waa caqabad cilmiyeed weyn, maaddaama ay adag tahay in la helo moodel awood u leh barashada qaab-dhismeedka, halabuurka iyo firfircoonida nidaamyada deegaanka si caalami ah. Macluumaadka intaa ka badan ee aad ka hayso, way sahlanaan doontaa inaad karti u yeelato saadaasha mustaqbalka, wax illaa iyo hadda ka sii adkaaday aragtida guud ee nidaamka deegaanka.
Maaha arrin cusub in laga cusbooneysiiyo ka mid noqoshada xogta horey loogu soo ururiyey barnaamijyada kombiyuutarka, laakiin waa in la sameeyo mashruuc tijaabo ah oo dhameystiran kaas oo lagu fekerayo ururinta macluumaadka aasaasiga ah.
Balliyada tijaabada ee jasiiradda
Balliyada macmalka ah, qoyaanka yar-yar ee horay loo sii diyaariyay, waxay ku yaalliin lix aag oo ka mid ah Jasiiradda Iberia oo leh deegaanno cimilo kala duwan leh: laba semi-oomane (Toledo iyo Murcia), laba alpine (Madrid iyo Jaca), mid Mediterranean (Évora, Portugal) iyo hal kuleyl (Oporto, Portugal).
Mid kasta oo ka mid ahi wuxuu deggan yahay 1.000 litir oo biyo ah iyo 100 kiilo oo faaruq ah oo labaduba ka socda aagga tijaabada laga fulinayo.
Si loo ogaado jawaabta nidaamka deegaanka ee isbeddelka cimilada, saamaynta ay ku leedahay balli kasta waxaa loo ekeysiiyaa iyadoo la maareynayo arrimaha deegaanka sida heerkulka, heerka biyaha, iwm. Tani waxay u oggolaan doontaa mustaqbalka in lagu tilmaamo saamaynta ay ku leedahay shabakadaha cuntada.
Waxaa jira saameyn ka timaadda heerka bakteeriyada iyo fayrasyada, taas oo ka dhigaysa saadaalinta mustaqbalka mid aad u adag. Saameyntani waxay cawaaqib xumo ku yeelan karaan wareegga kaarboonka waxayna saameyn ku yeelan kartaa firfircoonida badan ee xakameysa isbeddelka adduunka.
“Iberian Ponds”, oo ah shaqo socodka qunyar socodka ah, waxay ku horumarin doontaa tijaabooyin xaalado cimilo oo kala duwan: seddex meelood meel balliyada kuleylka deegaanka waxaa loo ekeysiin doonaa iyadoo la kordhinayo biyaha iyo heerkulka, seddex meelood meel kale waxaa lamid noqon doona lamadegaanka iyadoo kor loo qaadayo heerkulka biyaha. seddexaad ee ugu dambeeya, waxaa laga tagay iyada oo aan la khaldin, oo lagu xukumo kaliya xaaladaha cimilada ee hadda jira.
Dhammaan dhacdooyinkaan loo ekaysiiyay waa cawaaqib xumada ka dhalan karta isbeddelka cimilada ee deegaanka.
Sidaad u aragto, waxaa jira tijaabooyin iyo cilmi baarisyo badan oo loogu talagalay in lagu ogaado saameynta isbeddelka cimilada ee nidaamka deegaankeena maadaama ay tahay wax muhiimad weyn u leh badbaadada malaayiin nooc oo adduunka ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Isbedelka Cimilada » Balliyo macmal ah oo loogu talagalay jilitaanka saamaynta isbeddelka cimilada